दुई सय करोड क्लबमा एनआईशी एशिया एक्लो, अन्य बैंकको अवस्था कस्तो ? | Nepal123.com
दुई सय करोड क्लबमा एनआईशी एशिया एक्लो, अन्य बैंकको अवस्था कस्तो ?
Author: admin Published Date: February 8, 2020 LeaveaComment on दुई सय करोड क्लबमा एनआईशी एशिया एक्लो, अन्य बैंकको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं । दुई अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकको समूह (दुई सय करोड क्लब)मा एनआईशी एशिया बैंक एक्लो देखिएको छ । माघ २५ गतेसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्ये एनआईशी मात्रै सो समूहमा पर्न सफल भएको हो । बजारमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये शनिबारसम्म १७ ओटा बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । यसमध्ये एनआईशी एशिया बैंकले २ अर्ब १ करोड रुपैंया नाफा कमाएको छ । अरुको नाफा २ अर्ब भन्दा कम छ ।त्यस्तै, १० ओटा वाणिज्य बैंकले १ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । त
← न्युजिल्यान्डले जित्यो सिरिज
‘इचंगुनारायणस्थित आवास भवनमा चीनबाट नेपाली ल्याएर नराखियोस्’ →